China High Quality Gasi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Safety Device Vagadziri uye Suppliers - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Solenoid Valve BBQ > Gesi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Kuchengetedza Mudziyo
Electromagnetic Valve Magetsi Mvura Heater
Gasi Solenoid Magnetic Valve yeFlameout Safety Device
Gasi Chengetedza Valve Gungano Guru Solenoid Valve
Gesi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Kuchengetedza Mudziyo
Anoshanda Kambi Kukosha: Iine yakajeka, ergonomic dhizaini, ino seti inokodzera zviri nyore mubhegi rako, musasa zvishongedzo giya, kana mukwende! Inokodzera kupatsanurwa mhando chirafu.Sezve nyanzvi Gesi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Kuchengetedzwa kwechigadzirwa mudziyo, unogona kuva nechokwadi chekutenga kubva kufekitori yedu uye isu tinokupa iwe yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi uye inouya nenguva.
1.Gas Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Kuchengetedza Mudziyo Sumo
Iyo yakanaka musasa kicheni michina yekutanga yako barbecue pati kana yekunze pikiniki, uye iwe unogona kuigovana navo nemhuri yako neshamwari. Great chishongedzo zvekunze musasa zvinopisa, pikiniki zvinopisa, nezvimwewo.
2. Chigadzirwa Parameter (Kutsanangurwa) kweGasi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Safety Device
Kuvhura ikozvino â‰¤70mA-180mA zvakare inogona maererano nekukumbira kwevatengi
Kuvhara ikozvino â ‰ ¥ 15mA-60mA zvakare inogona maererano nechikumbiro chevatengi
Yemukati kuramba (20 ° C) 20mÎ © ± 10%
Spring pressure 2.6N±10%
Ambient tembiricha -10°C - 80°C!
3.Product Kufanirwa kweGesi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Kudzivirirwa Mudziyo
Kambani ine ISO9001: 2008, CE, CSA certification
Zvese zvinhu zvine ROHS uye Reach standard
4.Product Feature Uye Kunyorera
Zviri nyore kuchengeta, waigona kuzvichengeta mukati mepoto, kapu, chitofu chikesi etc. Great lightweight packable backpacking and camping accessory, inorema chero chinhu.
Magnet Unit Magnet Valve yeFlameout Safety Device
zvichiita kuti igare yakasimba uye yakasimba. Zviri nyore kunamatira kumucheto wepasi wecasi. Makumbo anovhara pachigaba zvakachengeteka uye zvine simba, kuchengetedza chitofu chako chekambi uye peturu inogona kugadzika.
Q5: Ndinogona kushanyira fekitari yako?
A: Chokwadi, Tinogamuchirwa kushanyira fekitori mune chero mazuva ekushanda
Hot Tags: Gasi Solenoid Valve Magnet Valve yeFlameout Safety Device, China, Hunhu, Factory, Durable, Manufacturers, CE, Yemahara Sample, Mutengo, Suppliers, Brands
Lpg Thermostatic Gasi Vhuru Isa Magnet Varuvha yeKitchen Yekutengesa
Kubika Appliance Oven Zvikamu Gesi Geyser Magnetic Valve
Magnet Yuniti Magineti Valve yeFlameout Kuchengetedza Mudziyo